Sida Windows 10 Loogu Soo Celiyo Bartii Soo Celinta Hore | Wararka Daaqadaha
Sida loo soo celiyo Windows 10 barta soo celinta hore
Qolka Ignatius | | Tilmaamaha iyo tilmaamaha, Windows 10
Nidaamka hawlgalka Microsoft, Windows, ayaa lagu sifeeyay inuu yahay nidaamka qalliinka ee ku habboon balaayiin kombiyuutaro kala duwanIn kasta oo macOS, nidaamka hawlgalka Apple ee kombuyuutarkaaga, uu la jaan qaadayo dhawr iyo toban kombiyuutar oo keliya.
Haddii aan xisaabta ku darno iswaafajinta looga baahan yahay Windows, waa inaysan noqon mid la yaab leh, waqti ka waqti, waxaan la kulannaa cillado qaar, shaashado buluug ah, waxqabadka waxqabadka. Dhibaatooyinkaas oo dhan, had iyo jeer Waxay ka yimaadaan dhibaatooyinka software iyo hardware.
Haddii kombuyuutarkeenu bilaabo inuu bixiyo dhibaatooyinka shaashadda buluuga ah, wuu ka gaabiyaa sidii caadiga ahayd, waxay qaadataa nolosha si uu u bilaabo, waxqabadkiisu aad ayuu hoos ugu dhacay ... ka hor intaadan bilaabin raadinta internetka ee xal, waa inaad Kumbiyuutarkayaga ku soo celi bartii hore ee soo celinta.
1 Waa maxay macnaha nidaamka soo celinta ee Windows?
2 Sida loo abuuro barta soo celinta hore
3 Sida loo soo celiyo Windows 10 barta hore
4 Maamul dhibcaha soo celinta
5 U sahli abuurista toos ah ee dhibcaha soo celinta
6 Kumbiyuutarkaygu weli ma shaqaynayo
Waa maxay macnaha nidaamka soo celinta ee Windows?
Soo celi barta hore ee Windows, waxay la macno tahay in kombiyuutarka uninstall doonaa dhammaan codsiyada iyo darawallada Qaybaha kumbiyuutarkayaga oo aan rakibnay tan iyo markii ugu dambeysay ee aan abuurnay barta soo celinta ama si toos ah ayaa loo abuuray.
Nidaamkan Ma saamaynayso sawirada ama faylalka nooc kasta oo aanu ku kaydinay. Waxa kaliya oo ay saamaysaa shaqada nidaamka, ma saamayso faylalka aanu ku kaydsanay.
Soo celi dhibcaha kaliya kaydi xogta habaynta qalabka, ma sameeyo koobi kayd ah oo ka kooban waxyaabahayaga.
Hawshan waa in aan fulinaa anagoo adeegsanayna habab kale oo kale sida a daaqadaha kaabta, iyada oo la adeegsanayo darawal adag oo dibadda ah, goob kaydinta daruuraha ...
Waxaan abuuri karnaa dhibcaha soo celinta nafteena, laakiin sidoo kale Nidaamku wuxuu kaloo mas'uul ka yahay abuurista iyaga mar kasta oo aan rakibno codsi saameyn ku yeelan kara shaqada qalabka.
Sida loo abuuro barta soo celinta hore
para ka samee barta soo celinta hore ee Windows Si aan u awoodno inaan u isticmaalno mustaqbalka haddii aan u baahanahay, waa inaan fulinaa tillaabooyinka aan ku tusi doono hoos:
Marka hore, waxaan aadeynaa sanduuqa raadinta Windows oo ku qor Abuur barta soo celinta. Waxaan gujinaa natiijada ugu horeysa ee la muujiyo.
Marka xigta, waxaan aadeynaa xagga hoose ee daaqada oo guji Abuuri.
Marka xigta, waa in aan galnaa magaca aan rabno aqoonsado barta soo celinta in aan abuurno. Tusaale ahaan, "Ka hor inta aan la cusboonaysiin darawallada garaafyada".
Marka magaca la galo, Daaqadaha ayaa abuuri doona barta soo celinta ee kombiyuutarka, hab socda dhowr ilbiriqsi ama daqiiqado (waxay kuxirantahay nooca kaydinta SSD ama HDD ay leedahay).
Marka la sameeyo, waxay ina tusin doontaa farriinta Barta soo celinta si guul leh ayaa loo abuuray.
Sida loo soo celiyo Windows 10 barta hore
para soo celi Windows 10 si loo soo celiyo barta oo aan hore u abuurnay, waxaanu fulin doonaa tallaabooyinka aan ku tusi doono hoos:
Marka xigta, waxaan aadeynaa xagga hoose ee daaqada oo guji Soo celinta nidaamka.
Marka xigta, daaqad ayaa soo bixi doonta noo sheeg waxa habka soo celinta uu ka kooban yahay, hab aan saameyn ku yeelan dukumentiyada, sawirada iyo xogta kale ee shakhsi ahaaneed ee aan kaydsanay.
Waxa ugu badan ee lagu taliyay waa isticmaal barta soo celinta isla markiiba, taas oo ah, kii ugu dambeeyay ee aan sameynay, taas oo ah ikhtiyaarka ay Windows ku talinayso, in kasta oo aan sidoo kale haysanno ikhtiyaarka ah inaan dooranno barta soo celinta ee aan isticmaali karno.
para dib u soo celinta kombiyuutarka adoo isticmaalaya barta soo celinta ee ugu dambeysan in aan ku leenahay kooxdayada, guji Soo celinta lagu taliyay oo ugu dambeyntii guji soo socda si aad u bilowdo hawsha.
Maamul dhibcaha soo celinta
Qodobbada soo celinta, sida aan kor ku soo sheegay, ma kaydiyaan xogta aanu ku kaydinay qalabkayagaTaa beddelkeeda, waxay kaydiyaan goobaha kombuyuutarrada wakhtiga la abuurayo.
Waxaa loo turjumay Isbaanish: qaado meel aad u yar. Maareynta dhibcaha soo celinta ee kooxdeena ay abuurtay ama aan abuurnay, waxa kaliya ee caawinaya waa in la fududeeyo helitaanka midka aan raadineyno.
Dhammaan dhibcaha soo celinta waxaa laga dalbadaa kuwa ugu cusub ilaa kuwa ugu da'da weyn, sidaas darteed Aad bay u fududahay in la helo kii ugu dambeeyay ee la abuuray si fudud loogu soo celiyo.
Haddii aad rabto tirtir dhammaan dhibcaha soo celinta Windows 10 (kuwa aan abuurnay iyo kuwa nidaamku abuuray labadaba), waxaanu samayn doonaa tillaabooyinka aan ku tusi doono hoos:
Marka xigta, waxaan aadeynaa xagga hoose ee daaqada oo guji Samee.
Nasiib darro Windows ma ogola in aan si xulashada ah meesha ka saarno dhibcaha soo celinta waxaan rabnaa oo kaliya waxay noo ogolaataa inaan tirtirno dhamaantood.
Si aad u tirtirto dhammaan dhibcaha soo celinta Windows, dhagsii Tirtir.
U sahli abuurista toos ah ee dhibcaha soo celinta
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno, haddii aan rabno inaan ku soo celinno barta hore ee soo celinta, waa, si cad, u habeynaya kombuyuutarkeena si, si xilliyo ah u samee nooca kaydinta.
Haddii kale, marnaba ma awoodi doono inaan ku soo celino Windows gurmad hore oo xalka kaliya ee hadhay waa in la sameeyo dib uga soo deji Windows 10 meel eber ah.
Windows 10 ayaa leh natively shaqeysiin shaqada u ogolaanaya abuurista dhibcood soo celinta. Sidan, mar kasta oo aan rakibno cusboonaysiinta Windows, barta soo celinta ayaa la abuuri doonaa.
Mararka qaar, Cusbooneysiinta daaqadaha waxay saameeyaan shaqada kombiyuutarkaSidaa darteed, nidaamku si toos ah ayuu u abuuraa dhibco soo celinta si uu u awoodo inuu beddelo rakibidda.
Qodobadan laguma abuurin dhammaan codsiyada aan ku rakibno kumbuyuutarkaSida caadiga ah codsiyadu ma saameeyaan waxqabadka kombuyuutarka, laakiin marnaba ma dhibayso in la abuuro barta soo celinta cusub ka hor inta aan la rakibin codsiga.
Kumbiyuutarkaygu weli ma shaqaynayo
Marka aan dib u soo celino qalabkeena meeshii hore ee soo celinta, dhammaan cusbooneysiinta labada Windows iyo codsiyada kale, oo ay ku jiraan kuwa darawalada qalabkayaga, way baabi'i doonaan qalabkeena waxay u shaqayn doontaa mar kale sidii bilowgii.
Haa, nasiib daro tani maahan kiiska, waxaa laga yaabaa inay sababto sababtoo ah Qayb ka mid ah qalabkayaga ayaa dhaawacday (sababta ugu weyn ee muraayadaha buluuga ah). Xalka ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee meesha looga saari karo dhibaatadan waa in lagu bilaabo Windows qaab nabdoon.
Habkan, Windows ma rari doono darawalada qaybaha qalabkayaga, taas oo noo ogolaan doonta in aan meesha ka saarno, iyo in kale, in ay tahay software-ka qaybaha qalabkayaga.
Haddii qalabku si fiican u shaqeeyo, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa in la aqoonsado cilladda mid mid ka saaraya, qaybaha iyo bilaabista kombiyuutarka.
Labada qaybood ee hardware ee saameeya qalabkeena oo keena shaashado buluug ah oo leh Xusuusta RAM, kaarka sawirada iyo ugu dambeyntii, wadista adag.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Windows » Nidaamyada hawlgalka » Windows 10 » Sida loo soo celiyo Windows 10 barta soo celinta hore
Fikradaha Windows 11 Miyuu ka fiican yahay Windows 10?